Mathildedal Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - i-Finland | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Mathildedal
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Mathildedal
Anttipoff nr. 5 Mathildedal Indlu yangasese
I-Attipoff ise-Salo, emzaneni omuhle wase-Mathildedal, lapho phambilini bekulokhu kunqamuka khona. Isakhiwo sakhiwa ngo-1850 njengefulethi elisebenza ngezinga eliphezulu futhi kamuva salungiswa njengekhaya leholide. Leli khaya leholide elingamamitha-skwele angu-18 lisesitezi sokuqala namafasitela abheke egcekeni elingemuva elinokuthula.
Amasevisi athandwayo ase- Mathildedal ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Mathildedal